ခေတ်မီသူတိုင်း အသားလုံး(Myoma/Fibroid)ရှိသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ခေတ်မီသူတိုင်း အသားလုံး(Myoma/Fibroid)ရှိသည်
Posted by kai on Oct 27, 2010 in Health & Fitness |3comments
ယခုပြောပြဆွေးနွေးလိုသည့် အကြောင်းအရာ မှာအရေးကြီးပါသည်။ စာရေးသူ၏အပြင်လူနာဆေးခန်းများတွင်မကြာခဏကြုံတွေ့ရပြီးနားလည် သဘောပေါက်အောင် စိတ်ရှည်ရည်နှင့်ရှင်းပြရသည့် သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်သော (Myoma/Fibroid) ဖြစ်သည်။
Myoma မှာကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ အပျိုကြီးများ၊ အိမ်ထောင်ရှိလျက် ကလေးမမွေးသူများ၊ ကလေးဦးရေနည်းသူများ၊ အရွယ်ကောင်းလျက် နောက်ဆုံးကလေးမွေးပြီး ကိုယ်ဝန်ထပ်မံမရှိ တော့ဘဲ နှစ်ကြာနေသူများတွင် အဖြစ်များပါ သည်။
အသက်၃၅နှစ်နှင့်အထက် အမျိုးသမီးများကို အာလ်ထရာဆောင်းနှင့် စမ်းသပ်ကြည့်ပါက အများစုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ များသောအား ဖြင့်ကွမ်းသီးလုံး၊ဂေါ်လီလုံးအရွယ်ခန့်သာရှိတတ်သည်။ တစ်လုံးမှသုံးလုံး၊ လေးလုံးအထိရှိ နိုင်ပါသည်။၄င်းလူနာများတွင် ဘာလက္ခဏာမှ မပြပါ။သွေးသားမှန်ပြီး ကိုက်ခဲခြင်းလည်းမရှိ တတ်ပါ။ အာလ်ထရာဆောင်းလုပ်မှသာတွေ့ရသည်၊ဘာမှမခံစားရပါ။
သို့ရာတွင်အာလ်ထရာဆောင်းလုပ်စဉ်မှာအသားလုံးကလေးများရှိနေကြောင်းပြောလိုက်၍ အသေးစိတ်မသိဘဲစိတ်သောကရောက်ပြီးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ တချို့လူနာများ က အိုဂျီထံတောင်းပန်၍ ခွဲစိတ်မှုခံယူလိုက်ကြသည်။
သားအိမ်အသားလုံးအတွက် စာရေးသူမှလူနာ ၏ အခြေအနေအမျိုးမျိုးအပေါ် မူတည်ပြီးအကြံ ပြုလိုပါသည်။
၄။အသားလုံးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခံစားရသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ (Symptoms)တို့ ဖြစ်သည်။
– သားအိမ်နံရံအတွင်းဘက်(သားအိမ်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း) တို့ဖြစ် သည်။
သားအိမ်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းမှလွဲ၍ကျန်နှစ်နေရာတွင်ဖြစ်သောအသား လုံးမှာလူနာအားမည်သည့်လက္ခဏာမှမပေးပါ၊ အာလ်ထရာဆောင်း ရိုက် ကြည့်၍သာတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
သားအိမ်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းတွင်ဖြစ်ပါက အလုံးအရွယ်မည်မျှပင်သေးသေကာမူ မီးယပ် သွေးများခြင်း၊မီးယပ်သွေး တလလျှင်နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် နှင့် ဆက်တိုက်ပေါ်ခြင်းများဖြစ်စေသည်၊သွေးပေါ်စဉ်တွင်ကိုက်ခဲနိုင်သေးသည်။
အရွယ်အစားကြီးပါက ဗိုက်ပေါ်မှ စမ်းမိနိုင် သည်။အချို့လူနာများတွင် နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာသတိမမူမိဘဲ ၀မ်းဗိုက်တခုလုံးပြည့်ပြီးကိုယ်ဝန်လစေ့အရွယ်အထိကြီးတတ်သည်။ သားအိမ်၏ရှေ့ဘက်တွင်အလုံးကြီးပါက ဆီးအိမ်ကိုဖိနေ၍ဆီးခဏခဏသွားလိုခြင်း၊ဆီးသွား၍မ၀ဘဲ ဆီးကျန်ခြင်းနှင့်ဆီးမသွားနိုင်ခြင်းအထိဖြစ်တတ်သည်။ သားအိမ်၏နောက်ဘက်တွင်အလုံးကြီး ပါက ၀မ်းသွားရခက်ခြင်း၊ ၀မ်းကျန်ခြင်းများဖြစ် တတ်သည်။
အချို့လူနာများတွင်အသားလုံးများစွာရှိပြီးသားအိမ်၏နေရာအနှံ့တွင်အပြည့်ရှိနိုင်သည်။ဆီးသီးအစေ့အရွယ်မှ ရှောက်သီးအရွယ်၊ ကျွဲကောသီးအရွယ်ထိ အလုံးပေါင်းရာကျော်သည်အထိရှိတတ်သည်။
အရွယ်ကောင်းသူအမျိုးသမီးများအတွက်မူ အသားလုံးက သားဥပြွန် လမ်းဆုံတွင်ရှိ၍ဥပြွန်ပိတ်ကာကိုယ်ဝန်မရဘဲဖြစ်နေတတ်သည်။ သားအိမ် လိုဏ်အတွင်းတွင်ရှိသောအသားလုံးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရလာလျှင်လည်းသား ပျက်သားလျှောဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ သားအိမ်နံရံ အပြင်ဘက်၌ အသားလုံးကြီးရှိလျှင်ကလေးအနေအထားမမှန်ခြင်း၊ လစေ့ချိန်တွင် ကလေးဦး ခေါင်း မွေးလမ်းကြောင်းသို့ မ၀င်နိုင်ခြင်း၊မွေး ဖွားရာတွင်တစ်ဆို့ခံနေပြီး ပုံမှန်မမွေးနိုင်ခြင်း၊ သားဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်း၊သားဖွားပြီးနောက်သားအိမ်ကောင်းစွာမ၀ပ်ခြင်း၊ သွေးဆုံးအရွယ်တွင်သွေးဆုံးနောက်ကျတတ်ပြီးသွေးဆုံးပြီးမှ သွေးပြန်ဆင်းတတ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
အသားလုံးသည် ရံဖန်ရံခါ(Degeneration) ရုတ်တရက် ကြီးလာပြီး နာကျင်ခြင်း၊ အထိမခံ နိုင်ခြင်း၊အဖျားတက်ခြင်းများဖြစ်၍ အရေးပေါ်အဖြစ်ကုသရတတ်သည်။
ဤသို့အမျိုးမျိုးအစားစားဖြစ်နိုင်ရာ ကုသသောကုထုံးတွင်လူနာအသက်အရွယ်၊ကလေးရလိုမှု၊ အလုံး၏အရွယ်အစား၊အလုံးတည်နေရာ၊ အလုံးအရေအတွက်ကိုလိုက်၍ ကုသနည်းများမတူဘဲကွဲပြားပါသည်။
အလုံးသိပ်မကြီးလျှင်ဗိုက်ခွဲစရာမလိုဘဲ မှန်ပြောင်း (Hysteroscope) နှင့်အောက်ဘက် မှထုတ်နိုင်သည်။ အလုံးကြီး၍ဖြစ်စေ၊ရောဂါ လက္ခဏာရှိ၍ဖြစ်စေ၊ လူနာ၏အသက်ငယ်သေး ပြီးသားသမီးယူလိုသူများအတွက်အလုံးများသာထုတ် (Myomectomy) လေ့ရှိသည်။
ဤအသားလုံး၏သဘာဝမှာမီးယပ်သွေးဆုံး ပြီးပါက ဆက်လက်မကြီးထွားခြင်း၊ သေးငယ်သွားခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ မ ဟော်မုန်းဓာတ် အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်သည်။
များမကြာမီကပေါ်လာသော (Lupride Depot)ထိုးဆေးမှာဤအသားလုံးကိုကျုံ့စေ နိုင်ပြီး ဆက်လက်ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားစေ
သည်။ မီးယပ်ပေါ်စဉ် ကိုက်ခဲခြင်းကိုလည်းပျောက်ကင်းစေသည်။
သားအိမ်သို့သွားသော သွေးလွှတ်ကြောကိုပိတ်ဆို့ခြင်း(Embolization) ဖြင့်လည်းကု သကြသည်။
အသက်အရွယ်က၄၀နှစ်အောက်၊အသားလုံး ကလည်းသေးပြီး ဘာလက္ခဏာမှ မခံစားရ၊
အာလ်ထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်၍သာ တွေ့ရကာ ခွဲစိပ်ကုသရန် သို့မဟုတ် သားအိမ်ထုတ်ရန်လည်းမလိုအပ်သေးဟု ဆရာဝန်က ရှင်းလင်း ပြောပြသော်လည်း ပူပန်မှုမပျောက်ပဲ အသား လုံးရှိနေသည်ဟူသောအသိကြောင့် စိတ်သောကရောက်နေသော အမျိုးသမီးများသည်၆လသို့ မဟုတ်တနှစ်တကြိမ်အာလ်ထရာဆောင်းဖြင့် စစ်ဆေးရန်သာရှိပေတော့သည်။
M.B.,B.S., M.R.C.O.G., F.R.C.O.G.,
F.I.B.A (Cambridge)., Dr.Med.Sc.,PhD
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက် သြဂုတ်လထုတ်တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
I’m 26 years old,Single……But I wonder how could I get this kind of myoma in mine…..So upset!! Next year I will get married and haveaplan to get babies .But now I’m so unhappy for the freaking health. And many thanks for above post.Pls give me advise.
မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ထဲ ဆ၇ာဝန်တွေပါတာမို့ .. အမျိုးသမီးကိစ္စတွေခဏခဏဖုံးဆက်မေးလွန်းလို့ .. ဒီစာတွေ ဆ၇ာဝန်ကြီးယူအက်စ်ရောက်တုံး တောင်းထားလိုက်တာလို့ ထင်ပါတယ်..။သူရေးဖူးတဲ့စာတွေထင်ပါတယ်..။ ခေတ်မှီသူတွေ ဖြစ်ပြီး စိတ်မပူကြရအောင်ပေါ့..။
ယူအက်စ်မှာ သားဖွားမီးယပ်.. အမျီုးသမီးနဲ့ဆိုင်တာတွေကုတဲ့မြန်မာသမားတော်ဆရာဝန်ကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
သတင်းစာမှာ တယောက်မက .. ကြော်ငြာပါတာပဲ..။